March 29, 2016 by Gopal Bhandari · Leaveacomment
नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश होस् नहोस तर लोडसेडिङमा पहिलो धनी देश भने पक्का हो । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा १८ घण्टा लोडसेडिंग हुन्थ्र्याे बिगतमा । तर खोलामा पानी बगी राखेको छ । नेपाल जलस्रोतको समुचित उपयोगले मात्र पनि मुलुक धनी बन्नसक्छ । प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल निकै‘ धनी देश भनेर भनिन्छ । महाभारतको चुरे पर्वतमा युरेनियमको खानी, काठमाडौँमा ग्याँसको भण्डार, रोल्पामा सुन पत्ता लाग्यो जस्ता खबर पटक–पटक आइरहन्छन् । तर, नेपालमा के–कति खनिज छ–छैन भनेर वा संभावित खानी, खनिज, इन्धनबारे अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल सरकारले खानी विभागलाई तलब बाहेक वर्षको थोरै बजेट दिन्छ । त्यो रकमले निश्चित क्षेत्रमा ७–८ सय किलोमिटरको नक्शाङ्कन गर्न पनि पर्याप्त हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, विकास र उपयोग गरेर नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अहिलेसम्म अज्ञात् छ । वास्तवमा अहिलेसम्म नेपालभरिमा खनिज पदार्थहरु के–के छन् र कति परिमाणमा छन् भन्ने विषयमा पूर्ण रुपले अध्ययन–अनुसन्धानै भएको छैन । नेपालमा के छैन ? उत्तर आउँछ सबथोक छ तर उपयोग हुन सकेको छैन । तेल, ग्यासको खानी, बहूमूल्य पत्थरको भण्डार, जलस्रोत, वनजंगल, जडिबुटी, कृषियोग्य भूमि सब छ तर नेपाल गरीब छ ।
Posted in Science. Tagged with Gopal Bhandari, गोपाल भण्डारी, नेपाल, नेपालको युरेनियम, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिंड, युरेनियम.
← नेपालको युरेनियम सम्भावना मात्र कि उत्खनन योग्य पनि ?